Ku dhalida by gooyn | November 2019
Goobidda iyo daryeelka laf-dhabarka ee daaqadahaaga
Privet waa warshad ka mid ah caleenta geedaha yaryar, geedo yar yar iyo geedo yar yar oo geedo ah iyo geedo ka soo jeeda qoysaska Olive. Inta badan caan ka ah Yurub, Australia, Waqooyiga Afrika iyo Aasiya. Noocyada ugu badan ee gaarka loo leeyahay waxay ku jiraan Japan, Shiinaha, Taiwan iyo Himalayas. Ma taqaanaa? Hanti waxay ka kooban tahay konton nooc.
Quudinta Japanese Quince on your site
Chaenomeles, ama quince Japanese, waxaa la koray sida dhaqanka miraha quruxda leh iyo waxtarka leh. Inta lagu jiro ubax, dhirta this si cajiib ah quruxda waa qurxin beerta kasta, iyo miraha ay ka sameeyaan macmacaan delicious: jasiiradaha iyo ilaalinta. Chaenomeles waa lagama-maarmaan sida hareeraha hareeraha a, nidaamka xididdo badan oo la fiiqay carrada dabacsan.
Balsam - ubax beerta ah, kaas oo ah warshad ubax ah, hoos u fiican u dulqaadan. Balsam wuxuu leeyahay stem toosan oo toosan, koraya ilaa 50 cm, caleemaha oval ilaa 12 cm dherer. Balsam waa wax fiican in lagu abuuro quruxda hooska beerta. Waxaad ku kori kartaa ubax beerta ubaxa ah ee ku taal goobta, iyo guriga oo ku yaal daaqadaha.
Sida loo kobciyo juniper
Juniper waa warshad ka tirsan qoyska qashinka. Waxay muuqatay 50 milyan oo sano ka hor, adduunka oo dhan waxaa jira ilaa 70 nooc oo dhirtaas ah. Qaar ka mid ah juniperaha qaarkood waxay gaareen ilaa 15 m dherer ahaan. Noocyada iyo noocyada gawaarida loo isticmaalo naqshadaynta muuqaalka Cilmiga si toos ah u tag si noocyada iyo noocyada juniper.
Majeerteenka Majeertinka - waa warshad mar walba faa'iido u leh dhaqaalaha. Xijaabka, ama buluuga St. John, ka family of yasnotkovyh, ku koraan Aasiya, Mediterranean, Caucasus, Crimean ah. Wuxuu jecel yahay xajmiga iyo xargaha dhirta. Horumarka geedi-geedeedka tan iyo wakhtiyadii hore waxaa loo tixgeliyaa muqadas muhiim ah oo qumman. Wadaad iyo shinni waliba waxay daaweeyeen dhirta iyada oo leh jilicsanaan iyo daryeel.
Sida loo koro qolka gerbera on windowsill aad
Gerbera waa mid ka mid ah dhirta kuwaas oo si sax ah u qalanta jacaylka bannaanka iyo ubaxleyaasha. Ubaxyo waaweyn, dhirta sida ubaxyada ah oo ku yaal dheer dheer oo aan cagaha lahayn waxay noqon kartaa qurxinta dhabta ah ee gurigaaga. Dabcan, tan waxaa lagu heli karaa oo kaliya marka kiiska marka daryeelka saxda ah ee gerbera waa la hubiyaa, gaar ahaan, xilliga qaboobaha.
Sida loo koro oleanderada gurigaaga
Oleander waa warshad caleenta ah oo ka mid ah qoyska qurrov. Waxay leedahay ubaxyo qurux badan oo qurux badan oo kala duwan iyo caleemo cagaaran oo cagaaran. Waxaa jira halyeeyo badan oo la xiriira wakiilkan caleemaha, calaamadaha dadweynaha iyo falsafooyinka. Inkasta oo ay jirto qulqulka jiritaanka geedaha, ee hoos-u-dhigga waxaa si ballaaran loo isticmaalaa naqshada muuqaalka.
Japanese spirea - noocyada ugu fiican, beerashada iyo daryeelka
Badanaa fiiradaada sariirta magaalada waxay soo jiidataa geed yar oo qurxiyo leh ubaxyo casaan ah iyo caleemo huruud ah. Tani waa jasiiradda Japanese. Waxay ka heshay meel qiimo leh oo lagu qurxiyo sariiraha magaalooyinka iyo meelaha magaalooyinka ku yaalo, sababtoo ah qiimaha hooseeya, aan qabyo ahayn iyo ilaalinta sifooyinka qurxinta laga bilaabo guga ilaa dayrta goor dambe.
Lilac: Talooyin ku saabsan abuurista iyo daryeelka
Lilac waa geedo ubax ah oo leh rucubyo jilicsan oo ubaxyo jilicsan, oo faraxsanaanaya caraf udgoon oo jilicsan. Warshadani waxay u nugul yahiin manjooyin, taas oo kuu ogolaanaysa inaad qurxiso goobta iyo hal foom oo lagu qurxiyo, iyo kooxo, iyo xataa xayndaab ku nool. Halkee laga beeri karaa lilac Xaaladaha ugu fiican ee lilac waa sidan soo socota: meel bannaan; ciidda waa la qoyay, oo leh bullaacad wanaagsan iyo tilmaamayaasha acidity, u dhow dhexdhexaad; marinka biyaha dhulka ugu yaraan hal mitir iyo badh ka soo wareega; iftiinka qorraxda badanaa maalintii; hoyga laga bilaabo qoraalada.
Sida loo koriyo zamiokulkas, beeritaanka iyo daryeesha "geedkii lacagta"
Zamioculkas waa ubax qalaad oo ah mid aad u caan ah muddo gaaban. Waxay u egtahay haweeney ciriiri ah, waxaa loo yaqaan geed ah lacag, laakiin si aan loo dhicin dambiilaha, zamiokulkas waxaa badanaa la yiraahdaa geed dollar ah. Sidaa darteed, sidaas darteed, wuxuu inta badan qurxiyo booska xafiisyada iyo bangiyada. Xaaladaha ugu wanaagsan ee koritaanka dhirta Duurjoogta, dhirta ayaa si fiican u kobcisa carrada qalalan iyo qorraxda kulul.
Daryeelka iyo xaaladaha sii kordhaya ee loogu talagalay curonia guriga
Begonia waa warshad ka tirsan qoyska Begoniyev iyo qurxiyo kala duwan, beeraha iyo guryaha. Dunida waxaa ku jira qiyaastii 900 nooc oo buuxa ee dhirta. Homeland Begonias - Southeast Asia. Cabbirka dhirta wuxuu noqon karaa 5 cm ilaa 3 m dherer ahaan. Maqaalka this, waxaad ka baran doontaa qaar ka mid ah qarsoon ee daryeesha begonia ubax qurux badan guriga.
Dhammaan siraha ah ee lagu kobciyo achimenes guriga
Ahimenez waa xubin qoys reer Gesneriev ah. Waxaa jira qiyaastii konton noocyo of thisennies kuwaas oo adduunka. Homeland Ahmenes - Koonfurta iyo Bartamaha Ameerika, waa la yaqaan tan iyo qarnigii XVIII. Maqaalkani wuxuu kugu wargelin doonaa dhammaan qarsoodiga ah ee ubaxyada sii koraya guriga. Ma taqaanaa? Ahimenez - qof qaraabo ah
Noocyada beerashada iyo daryeelka ee lafaha, beeraha ubaxa beeraha ubaxyada
Rosemary waa dufan, oo loo yaqaan 'spice'. Si kastaba ha noqotee, looma isticmaali karo oo keliya karinta, waxay leedahay qaar ka mid ah bogsoonaanta iyo saliidaha lagama maarmaanka u ah sunta iyo maaddada korrinka. Rosemary: Plant Description Sidaas, waa maxay rosemary? Tani waa geedo dilaacsan oo leh caleemo, irbado, oo la mid ah cirbadaha geedaha.
Daryeelka saxda ah ee guriga dhismaha
Thunbergia waxaa lagu qiimeeyaa ubaxyo qurux badan, kuwaas oo noqon kara midabyo kala duwan, iyo sidoo kale dabiiciga ah. Waxaa laga tagi karaa si ay u gurguurto dhulka, oo lagu daboolo dheriyo si ay u laalaadaan caleemaha jilicsan, ama u daadi taageerada. Si kastaba ha noqotee, dhul furan, waxay u baahan tahay qaliin sannadle ah. Xaaladaha ku habboon ee tunberia sii koraya ee guriga Ugu yaraan beerashada beeraha ee tunbergia ee guriga.
Sifooyinka qorraxda sii kordhaya ee beertaada
Waxyaabaha loo yaqaan 'Iberisreen' waa geedo digaag ah oo ka mid ah qoyska qallooca (kaabajka), oo tirinta ilaa 40 nooc. Magaca labaad - Iberian, basbaas, stennik, razlelepestnik. Goobta dabiiciga ah waxay ku koraan gobollada buuran ee Aasiya, dalalka Mediterranean, Caucasus, Crimean iyo gaadiidka hoose ee Don. Ma taqaanaa? Iberis waxay magaceeda ka qaadatay erayada Iberia - magaca Giriigga ee casriga ah ee casriga ah ee Spain, halkaas oo buuraha Iberian ku yaalliin qarxiyey.
Isku dhufashada abuurka iyo taranka ee Magnolia
Magnolia waa mid ka mid ah ubaxyadii ugu quruxda badnaa, oo ah qof kasta oo ku xeeran quruxdiisa, kala duwanaansho iyo caraf udgoon. Taageerayaasha naqshadeynta qurxinta aan la isku hallaynin ayaa si joogta ah u shaqeynaya si ay u qurxiyaan aagaggooda iyaga oo leh geedaha quruxda badan, iyagoo u adeegsanaya habab kala duwan.
Gooynta Clematis ee guga iyo dayrta
Clematis waa geed leh ubaxyo aad u qurux badan oo midabyo kala duwan leh. Ubaxku wuxuu soconayaa laga bilaabo guga ilaa dayrta goor dambe. Warshad waa qaali, sidaas darteed macluumaadka ku saabsan sida clematis ku dhufan doonaa faa'iido u ah bannaanka u badan. Ma taqaanaa? Clematis waa dhir alaab ah oo ka tirsan qoyska Buttercup oo ah warshad alwaax ah.
Wax kasta oo aad u baahan tahay si aad u ogaato koritaanka Potentilla
Dabeecadda, waxaa jira ilaa 500 nooc oo Potentilla ah, oo ka mid ah cawska iyo geedaha. Naqshad dhuleed, waxaa loo isticmaalaa labadaba. Xaqiiqdii, marka lagu daro hantida daawada ee faa'iido leh, geedka iyo ornamental. Geedka Beerta Potentilla beerta dhexdeeda, geedaha Silverweed ma ahan kuwo furfuran oo ku jira daryeelka, beerashada iyo dhirta sii kordhaya sidoo kale ma noqon doonto mid sahlan.
Goobidda iyo daryeellida multiflora ee Chrysanthemum, qaababka dhirta guud ee koraya
Florist iyo xadiiqada beerta ayaa horumarinaysa maanta sida ugu dhakhsaha badan sida warshadaha kale. Koox cusub oo dhirta, kuwaas oo ku guuleystay suuqa ubaxa iyo hadda waa at ugu sarraysa ee caanka ah ee bannaanka, waa multiflora chrysanthemum. Thanks to sifooyinka wanaagsan ee qurxinta, ubax this guursaday quluubta ma aha oo kaliya florists professional, laakiin sidoo kale hiwaayadaha raba in ay qurxiyaan sirqoolladooda.
Xeerarka loogu talagalay taranka taranka: Talooyin ka yimid beeralayda ubaxa qibrada leh
Dareemayaal badan ayaa xiiseynaya su'aasha, maxay yihiin siyaabaha dhalmada ee kampsis. Kaliya waa ogyahay dhalashada wax soo saarka, kuwa kale waxay og yihiin siyaabo dhowr ah oo u kordhaya dhirta dhalinyarada ah ee caleemaha ama qaybaha nidaamka xididka. Si aad u ogaato oo awood u yeelatid inaad isticmaasho dhammaan hababka la heli karo ee dhalmada ubaxa, waxaanu soo diyaarinay maqaalkan.